Mugabe defies mounting pressure to quit - Portland Press Herald
Mugabe defies mounting pressure to quit
The Zimbabwe president disappoints many with a speech that did not include his resignation.
Disappointed Zimbabweans watch a televised address to the nation by President Robert Mugabe at a bar in downtown Harare on Sunday. Mugabe baffled the country by ending his address without announcing his resignation. Associated Press/Ben Curtis
HARARE, Zimbabwe — Zimbabwe’s President Robert Mugabe defied calls to quit Sunday, saying he will preside over a ruling-party congress in December in an announcement that could trigger impeachment proceedings this week and more protests demanding his ouster.
Zimbabweans react while watching President Robert Mugabe delivering his speech during a live broadcast at State House in Harare on Sunday. Associated Press/Tsvangirayi Mukwazhi